Banyere Anyị - NORTH&HUSBANDRY Machinery (QZ) Co., Ltd.
Ụlọ ọrụ North Husbandry Machinery bụ onye na-emepụta ihe nke na-emepụta ikuku ventilashị na akụrụngwa jụrụ oyi. Iji nye ụzọ kacha mma nke ikuku ikuku maka ugbo anụ ọkụkọ. Iji mepụta mma kachasị elu nke ndị na-ekpo ọkụ, ihe mkpuchi oyi na ihe ọ bụla ọzọ maka ndị ahịa anyị site na iji igwe na teknụzụ dị elu. .Dịka mbụ nke sayensị, anyị na-tumadi na-nkà mmụta sayensị usoro, nkà mmụta sayensị echiche, ọkachamara management , iji kwalite ngwa ngwa mmepe nke anụ ụlọ.
North Husbandry Machinery Company ebubatala ngwa nrụpụta ọhụrụ nke sistemu jụrụ oyi na 2007, n'ọtụtụ oge mgbalị na ọmụmụ, mechara nwee ihe ịga nke ọma wee malite imepụta ụdị paịlị jụrụ oyi na Jane, 2007.
N'afọ 2013, ụlọ ọrụ anyị webatara akpaaka CNC stamping, nnukwu CNC na-ehulata na ngwa ndị ọzọ na-edozi ngwaike. N'otu oge ahụ, anyị malitere ịmepụta ndị na-ekpo ọkụ ọkụ nke bụ otu usoro dị ka ihe mkpuchi oyi, na e nwekwara ụfọdụ nri anụ ọkụkọ. usoro ngwaahịa.Hammer ụdị fan , Pull and push fan, na ụfọdụ usoro nke nnukwu iyuzucha Fans e ọma mara dị ka ndị ahịa si n'ụwa nile , site n'ụzọ anyị malitere ịnakwere iwu si n'èzí nke ala.
N'afọ 2016, anyị mere nnukwu ọrụ nyocha nke ndị na-akwado Pull na Push Cone na n'ikpeazụ anyị nwetara ya. A na-anabata onye ahịa n'ụzọ dị mfe ma hụ ya n'anya na ahụmịhe nkwalite afọ abụọ gachara. Ugbu a, ụlọ ọrụ anyị nwere ihe karịrị iri isii ụdị ngwaahịa dị ka Pull na push cone fan, Hammer cone fan, Butterfly cone fan Pull and push fan, Hammer fan, hanging fan, Brown cooling pad, single side of black cool pad, green and edo edo, sistemu njikwa gburugburu ebe obibi, akụrụngwa nri anụ ọkụkọ, onye na-aṅụ ara, Cages anụ ọkụkọ, onye na-eri nri, Silo, na ndị ọzọ.
Ụlọ ọrụ anyị na-ekwusi ike na echiche nke Onye ahịa bụ ihe kachasị elu , na ịkwụwa aka ọtọ na ntinye aka.
N'ihi na anyị ụkpụrụ nke ngwaahịa àgwà, anyị na-na oké njọ ego nke ịhọrọ ihe nke na-elekwasị anya na 275g galvanized mpempe akwụkwọ iji gbochie nchara. Na anyị na-akwụkwu na ọzọ anya na ọ bụla mmepụta ọganihu nke mere na o nwere ike ibelata mmebi nke elu.
Anyị na-agbalịkwa nke ọma ka anyị ghara izipu ngwaahịa ọ bụla nwere nkwarụ.
1. 24 awa na akara. Ọ bụrụ na ị nwere nsogbu ọ bụla, ị nwere ike ịkpọtụrụ m n'oge ọ bụla.
2.Good mgbe-ire ọrụ. Akụkụ fan ọ bụla anaghị arụ ọrụ na akwụkwọ ikike (na-abụghị mmebi artificial), anyị ga-ezigara gị ozugbo.
3. Anyị nwere ike igosi gị nkà na ụzụ maka dị iche iche iyuzucha fan n'ụlọ anụ ọkụkọ ma ọ bụrụ na ị na-enweghị ikwu ahụmahụ.
Ihe mkpuchi mkpuchi griin haus, Sistemụ nri anụ ọkụkọ, usoro nri ụlọ ọkụkọ, Pad jụrụ oyi, anụ ọkụkọ feeder, nri ezi,